Yaab, Dhacdo & Barnaamij. – Page 20 – Saafi News Somali News & Entertainment Hindi Af Soomaali Musalsal
Yaab, Dhacdo & Barnaamij.	Dayuurad si weyn u soo jiidatay Indhaha caalamka oo loo sameeyey Madaxweyne Putin (Daawo Sawirro)
April 23, 2017	Yaab, Dhacdo & Barnaamij.
Comments Off on Dayuurad si weyn u soo jiidatay Indhaha caalamka oo loo sameeyey Madaxweyne Putin (Daawo Sawirro)
138 Views Dayuurada gaarka ah ee Madaxweynaha Ruushka Vladamir Putin ayaa si weyn u soo jiidatay warbaahinta caalamka, waxaana dayuuradaas loo bixiyey Kremlin-ka duula. Waxaa si weyn kuu soo jiidanaya quruxda dayuuradan iyo waxyaabo la yaab badan oo gudaheeda lagu diyaariyey. Dayuuradan oo nooceedu yahay Ilyushin il-96 ayaa waxyaabaha gudaheeda lagu diyaariyey waxaaka mid ah xafiiska Madaxweynaha oo si qurux badan loo ...
Daawo Sawirada :Dhibka qabsaday Cunsuriyada ugu caansan Faransiiska iyo cabsida la soo gudboonaatay !!
Comments Off on Daawo Sawirada :Dhibka qabsaday Cunsuriyada ugu caansan Faransiiska iyo cabsida la soo gudboonaatay !!
122 Views Haweeneyda hogaamisa Xisbiga Cunsuriyiinta dalka Faransiiska ee (FN) laguna magacaabo Marine Le Pen ayaa waxaa la soo gudbootaay cabsi ka dib markii si toos ah loo soo weeraray . Marine Le Pen oo kaalinta labaad kaga jirto tartanka doorashada dalka Faransiiska oo maanta oo Axada ah ka dheceysa ayaa xili ay olalaha doorashada ku jirtay , lana hadleysay Taageerayaasheeda ayaa ...
Gabar bistoolad la raacday diyaarad Maraykanka ka duushay !!(Daawo Sawirro)
April 22, 2017	Yaab, Dhacdo & Barnaamij.
Comments Off on Gabar bistoolad la raacday diyaarad Maraykanka ka duushay !!(Daawo Sawirro)
142 Views Haweenay ka tirsan booliiska Maraykanka oo ku jirtay fasax ayaa iyadoo biskooladeedii ku wadata boorsada gacanta ka duushay garoonka caalamiga ah ee Los Angeles, iyadoo ku sii jeeday Taiwan. Qalabka baaritaanka ee garoonka ayaan qabanin bistooladda, Noell Grant ayayna u xaqiiqawday in ay bistoolad wadato markii ay damacday in ay diyaarad kale ka raacdo Taipei. Masuuliyiintii garoonka ayay ku wargalisay ...
Daawo Muuqaal : Awooda Ciidamada Turkiga iyo Wadamada uu Saaxiibka la yahay & kuwa Cadawga ku ah !! .
Comments Off on Daawo Muuqaal : Awooda Ciidamada Turkiga iyo Wadamada uu Saaxiibka la yahay & kuwa Cadawga ku ah !! .
101 Views Awooda ciidamada Milatariga dalka Turkiga ayaa sanadahaan dambe noqotay mid aad baaxad weyn waxaana isha ku haya Caalamka oo idil gaar ahaan wadamada tartanka uu kala dhaxeeyo . Shacabka dalka Turkiga ayaa dhoor jeer la isku dayay in qal qal iyo qalalaase la galiyo si ay meesha uga baxdo awooda cusub ee uu la soo baxayo Milatariga dalka Turkiga oo ...
April 21, 2017	Yaab, Dhacdo & Barnaamij.
Comments Off on Dhacdo Argagax leh oo Sababtay Dhimasho oo ka dhacday Ceelasha Biyaha
103 Views Wararka aan ka heleyno deegaanka Ceelasha Biyaha ee kuyaala duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacday arin araggax leh ayna aad uga naxeen dad badan. Sida aan Wararka ku heleyno Deegaanka lagu magacaabo Arbacow oo katirsan Ceelasha Biyaha ayaa muran ka dhashay dhul la isku heesto waxaa ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Labo Nin ...
Comments Off on Tv-da dal ka mid ah Carabta oo bilaabaya olole lacag loogu ururinayo abaaraha Somalia (Daawo Sawirro)
110 Views Dowladda iyo Shacabka Isutaga Imaaraadka Carabta (UAE) ayaa maanta oo Jimce ah iclaamiyey in dhammaan TV-yada Imaaraadka ay si toos ah (live) ugu ololeynayaan in shacabka Imaaraadka uu lacago u ururiyo Abaaraha Soomaaliya. Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yarisow) oo shalay kulan gaar ah la qaatay Safiirka Imaaraadka ee u fadhiya Soomaaliya Mudane Maxamed Al-Othman ayaa ugu ...
Page 20 of 207« First...10«1819202122	»	304050...Last »	Design by: Saafi Films Team.